Virapin Ramamonjisoa, minisitry ny fanatanjahantena malagasy - Jean Paul Rabier
« Efa tsy matoky azy intsony ny federasiona. Izahay ihany koa dia efa ela no nohamaivanin’io mpanazatra io », hoy i Virapin Ramamonjisoa, minisitry ny fanatanjahantena malagasy. Raha ny fitantaran’ity minisitra ity dia efa ela no tsy nanome hasina ny fanjakana malagasy, izay manakarama azy, i Jean Paul Rabier.
« Raha nisaina dia efa impolo kely no nandefa taratasy fangataham-panazavana mikasika ny faharesena tetsy Mahamasina sy tany Nizeria izahay. Tsy afaka manao na inona na inona anefa izahay noho ny fanajana ny fanapahan-kevitry ny federasiona. Amin’izao dia efa isan’ireo efa leo amin’ny asan’ity napetraka ho lohan’ny Barea ity ny rafitra eo amboniny », hoy ny minisitra teto. Mbola nohamafisin’ny Filohan’ny federasiona, Ahmad, tamin’ity herinandro ity fa « tsy mahaf-po azy ireo ny asa nataon’io mpanazatra io ». Narangarangan’ny minisitra nandritra ny resaka nataony tamin’ny mpanao gazety omaly fa « aleo hanampiana an’ireo mpanazatra malagasy sy ireo mpilalao ary ekipa eto an-toerana ny vola tokony holaniana » ho an’ity mpanazatra frantsay ity.